Maaraynta biyaha Roobka Jiilka Labbaad | Saint Paul Historical
Safaynta Biyaha Daadka
Maaraynta biyaha roobka socda waxay muhiim u tahay qorshaynta magaalada iyo daryeelka deegaanka. Goobta Beacon Bluff waxay ku sii daysaa biyo aaga ah ugu dhowaan 163 qooddi oo biyaha roobka oo u qulqula dhanka dhuunta dhulka hoosteeda ee Phalen Creek iyo kama dambaysta Wabiga Mississippi. Beebka biyaha jira ee 48 hiish, ee ku yaala Duchess Street, waxa uu isku xidhaa dhex roor 14 fuudh ah Dhuunta biyaha roobka ee dhulka hoosteeda Phalen Creek taas oo ku sii daysa biyo aan la safayn si toos ah wabiga Mississippi.
Masuuliyiinta dekada iyo Magaalada Saint Paul waxaa lagula loolamay inay qorsheeyaan nidaam lagu weecinayo dhowrka hiish ee u horeya ee biyaha socda e eka yimaado roobka xoogan, caadi ahaan ka kooban heerarka saree ee biyaha waxa ay qaadaan iyo wasakheeyayaasha, ee nidaamka safaynta biyaha daadka.
Nidaamka safaynta biyaha roobka waxay isticmaashaa agabyo cusub gudaha dhismaheeda. Waxay hirgelisaa nidaamka ka warhaynta isku dhafan ee ururinta xiliga dheer ee xogta si loo qiyaaso sida biyahu nadiif u yihiin ka hor inta aanay gelin nidaamka biyaha dhulka iyo inta ay leegtahay biyaha daadka ah ee gelaya dhulka ee cusboonaysiiyaha biyaha dhagaxa dhulku qabto ee dhulka hoostiisa. Fareemkan fasiraada waxaa loogu talo galay si uu u horumariyo fahanka biyaha socda ee roobka iyo dheefaha safaynta saxda ah ee harrooyinkeena, wabiyada, iyo ilaha biyaha dhulka hoostooda.
Nidaamka Safaynta ee Jiilka Labbaad
Nidaamka daadka roobka Jiilka Labbaad waa mid ka mid ah nidaamyada u wayn ee biyahu ku galaan dhulka hoostiisa gobolka Minnesota oo leh raadka cabbirta labba garoon oo kubbada kolleyga ah awoodo kaydinta dhammaad ilaa dhamaad ah ee in ka badan 150, 000 fuudh oo jibaaran ( waxyar ka yar labba berkadaha dabaasha Olombiga ama ka badan hal milyan oo galaan). Nidaamku waxaa uu ka koobanyahay saddex saf oo 10 fuudh ka ah dhex roorka beebka birta ah ee daloola wadartiisu tahay 650 fuudh dherer ahaan.
Beebabka, oo ku duuban shaando, waxaa la dhigaa camuuda hoosta sariirta jajabka taayir ( oo beddelaya urursanka dhagaxa), camuuda, camuuda sare oo la nidaamiyay, iyo siidka dhirta. Beebkan waxaa ku xidhan dhismaha god biyahu ku ururaan oo leeg nidaamka biyo joojinta uu ku sameeyay Saint Anthony Falls Laboratory (SAFL) xaga jaamacada Minnesota si dhoobada looga ilaaliyo biyaha daadka ah. Tani waa markii u horaysay ee biyo joojinta SAFL lagu daray nidaamka biyo shubka daadka roobka ee Jiilka Labbaad, tii u horaysay wadanka.
Nashqada biyo joojinta SAFL waxay isticmaashaa gododka yaraynta daadka si loo qaboojiyo xawaaraha biyaha oo loogu oggolaado waxa la socda biyaha inay ku hadhaan godka biyahu ku ururaan. Nidaamka dejintu waxa uu ka saaraa 90 boqolkiiba waxa soo raacay biyaha iyo wasakeeyayasha la socda waxa biyaha soo raaca. Qashinka biyaha soo raacay iyo wasakheeyayaasha waxaa si muddaysan uga saara gaadhiga nuuga.
Beeka jiifka u yaalaa waxay ka kooban yihiin qalabyada ka warhaynta si loo qiyaaso heerka biyahu ku galaan dhulka iyo muunada tayada abiyaha.
Ka warhaynta Safaynta iyo Xogta
Tayada biyaha iyo mugga biyaha waxaa lagaga warhayaa 21 goobood oo kala gaar ah. Qalbka ka warhayn waxaa ka mid ah beebka daadka ee biyahu ku ururaan, mitirka qiyaasta oo lagu rakibo foostooyin ku jira dhulka hoostiisa, qiyaasta cadaadiska si loo qiyaaso dherarka biyaha gudaha beebka dhex roorka 10 fuudh, iyo qiyaasta roobka ee goobta ah.
Xogta la warhaynta waxay bixin doontaa caddaynta si loo go’aansado nidaamka inuu ushaqaynayo sida la filayay. Xogta soo socta waxaa la raad raacayaa mugga biyaha laga weeciyay beebka 48 hiish ah oo lagu qabtay nidaamka Jiilka Labbaad; yaraynta waskhaysanka; heerka biyahu ku galaan camuuda; iyo qadarka biyaha ah ee galay dhagaxa biyaha qabta ee biyaha dhulka hoostooda.
Roobkii duufaanka ugu horeeyay ee ugu waynaa waxaa la diiwaangeliyay 2012 inuu geliyay dhulka in ka badan hal milyan oo galaan. Xogta laga ururshay qalabka ka warhaynta ilaa 2012 waxay muujinayaan nidaamka inuu buuxinayo ama dhaafay filashooyinkii.
Saint Paul Port Authority, “Maaraynta biyaha Roobka Jiilka Labbaad
,” Saint Paul Historical, accessed February 19, 2019, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/348.